1. Kucelwa wazi ukuba amangenelo okhuphiswano luka-2017 avulelekile.
2. Umxholo ka-2017 uthi: "Harnessing Sustainable Energy for Regional Economic Development." Umxholo, osuka kwingqungquthela yeentloko nakoorhulumente bamazwe ngamazwe i-36th Ordinary South African Development (SADC) Summit of Heads of State and Government, uthi: "Resource Mobilisation for Investment in Sustainable Energy Infrastructure for Inclusive SADC Industrialisation for the Prosperity of the Region". Xoxa ngokuphathelele ekubeni oku kungakhokelela njani kuphuhliso lwezoqoqosho oluzinzileyo.
3. Eli qela leengongoma lenzelwe ukukhokela abangenelayo ekuxoxeni ngalo mxholo oyintloko ungentla. Abangenelayo mabaxoxe ngazo zonke iingongoma ezidweliswe apha ngezantsi:
Xoxa ngezinto eziyinzuzo kwezoqoqosho ezixhanyulwa ngamazwe angamalungu eSADC ngokuphathelele kwiinkqubo zotyalo-mali kwizibonelelo zamandla asetyenziswa ngononophelo (sustainable energy resources). (20 amanqaku)
Xoxa kuvokotheke ngeendidi zethekhinoloji zamandla asetyenziswa ngononophelo ezixhasa iphulo lelizwe liphela (global initiative) "lokunonophela indalo" ("going green"). (15 amanqaku)
Njengomfundi wasesekondari, qaphela izakhono ezingundoqo ezibalulekileyo ezifunekayo ukuqhubela phambili iiprojekthi zezibonelelo zezamandla ezisetyenziswa ngononophelo kummandla weSADC. (20 amanqaku)
Xoxa yaye unike nemizekelo yeeprojekthi zosetyenziso lwezamandla ngononophelo kummandla weSADC ezijoliswe kumanyano ngokommandla nokhuseleko lokubonelela ngezamandla (regional integration and energy supply security). (15 amanqaku)
Xoxa ngesiphumo esingancomekiyo esibangelwa lusetyenziso loovimba bezamandla kokusingqongileyo kwanokucacisa malunga nokuba yeyiphi imigaqo emiselwa yiSADC ukunciphisa ezi ziphumo. (15 amanqaku)
Xoxa ngendima emayidlalwe ngabathathi-nxaxheba abangeyonxenye yoorhulumente (non-state actors), amacandelo amashishini abucala (private sector), imibutho engekho phantsi kukarhulumente (non-governmental organisations), oogunyaziwe bemveli (traditional authorities) kwanoluntu lwasekuhlaleni ekubonelelweni nasekuzisweni kwezamandla asetyenziswa ngononophelo ngenjongo yokuphuhlisa ezoqoqosho nezentlalo. (15 amanqaku)
4. Kucelwa uqaphele ukuba:
Isincoko eso masingabi ngaphezulu kwe-1500 yamagama ubude yaye singabi nganeno kwe-1000 yamagama ubufutshane. Ukuba isincoko eso sichwetheziwe, ongenela olu khuphiswano makasebenzise u-Arial 12 (u-1.5 wokuspeyisa) aze anonjolwe amakhasi.
Izincoko mazingeniswe zichwetheziwe ngolwimi lwesiNgesi.
Umphambili woqweqwe makubhalwe kuwo igama lomfundi, iinkcukacha zoqhagamshelwano (iselula nedilesi ye-imeyili), igama lesikolo kunye nephondo.
Olu khuphiswano luvuleleke kubafundi bezikolo eziziziisekondari kuphela.
5. Bonke abafundi bezikolo eziziisekondari abangabemi bamanye amazwe (secondary school nationals) abasuka kuloo mazwe angamalungu eSADC bamkelekile ekuthatheni inxaxheba kolu khuphiswano.
6. Kuya kuthunyelwa izincoko ezichongiweyo zibe zithathu ezisuka kwiphondo ngalinye zisiya kwiSebe leMfundo esiSiseko likazwelonke ungadlulanga owe-05 Meyi 2017. I-Ofisi kaNobhala yeSADC (SADC Secretariat) ibekele bucala isixa esiyi-US $1000 njengebhaso lemali elenzelwe abaphumeleleyo kuzwelonke bokhuphiswano abakwilizwe ngalinye elililungu lommandla weSADC. Ibhaso lemali liya kwahlulwa-hlulwa ngolu hlobo lulandelayo:
Yi-US $500 kwibhaso lokuqala
Yi-US $300 kwibhaso lesibini
Umgqatswa ngamnye uya kufumana umlinganiselo webhaso lemali elitshintshelwe kwiirandi. Izincoko ezithathu eziphumeleleyo kuzwelonke ziya kuthunyelwa kwiOfisi kaNobhala weSADC ukwenzela ukuba zibe nokuthathelwa ingqalelo kolu khuphiswano lommandla.
7. Amangeno anokuthunyelwa kula magosa alandelayo ngomhla okanye phambi kowe-07 Apreli 2017:
Nks F Haffejee (DCES-English), i-imeyili: Fazeela.Haffejee@westerncape.gov.za Ifeksi: 086 627 7434; okanye
Mnu G Samaai (DCES-Geography), i-imeyili: Glen.Samaai@westerncape.gov.za
Uvumelekile kwakhona ukungenisa amangenelo akho ngokudlula kuMcebisi ngeZifundo wesiNgesi/weJografi kwi-ofisi yesithili sakho.
8. Sinqwenela ukukhuthaza zonke izikolo zithathe eli thuba lokuthatha inxaxheba kolu khuphiswano lunika umdla.
9. Kucelwa wazise okukule ngcaciso imfutshane bonke ootitshala abachaphazelekayo ukuze bakuthathele ingqalelo oku.